Hoganka arimaha dibada ONLF iyo wafdi uu Hogaaminayo oo Maraykanka kadagay. | ogaden24
Hoganka arimaha dibada ONLF iyo wafdi uu Hogaaminayo oo Maraykanka kadagay.
Wafdi balaadhan oo uu Hogaaminayo Gudomiyaha Hogaanka arimaha dibada ee Jabhada ONLF ayaa Gaadhay dalka Maraykanka gaar ahaan state-ka Minnesota oo saldhig u ah Jaaliyada ugu balaadhan ee ree Ogadenia.
Wafdiga Halgame Maadeey ayaa waxaa kamida Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta Jwxo Mudane Hassan Moalin, waxaana wafdiga si diiran usoo dhaweeyay Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka Maraykanka oo aan u kala hadhin.
Waftigan ayaa waxay ka qayb gali doonaan shirar caalami ah oo lagaga hadlayo arimaha gumaysiga Itoobiya oo haatan xaalada kama dambays ah kujira, sidoo kale waxay wafdigu kulamo la qaadan doonaan ururo badan oo kasoo horjeeda nidaamka gumaysiga Itoobiya Jaaliyad waynta ay martida u yihiin ee Ogadenia iyo Guud ahaan bulshada Bariga Africa kasoo jeeda.
Waxaa ka socda dhamaan ba daafaha caalamka abaabul xoogan oo ay wadaan jaaliyadaha Ogadeniya iyo shirar looga tashanayo arimha Halganka looguna diyaar Garoobayo is badalada la filayo inay mustaqbalka dhow kadhacaan dalka Itobiya.